Nhetembo dzaRubén Darío, hwaro hwekunyora kwemazuva ano muAmerica. | Zvazvino Zvinyorwa
Nhetembo yaRubén Darío.
"Nhetembo Rubén Darío" ndeimwe yekutsvaga kwakajairika paGoogle, uye hazvisi pasina, tarenda remudetembi uyu raizivikanwa. Munyori akaberekerwa muMetapa, Nicaragua, muna Ndira 18, 1867. Akazozivikanwa muLatin America nekutenda kunhetembo yake - tarenda raakaratidzira kubva achiri mudiki-, kunyangwe hazvo akamira semutori wenhau uye mumiriri. Félix Rubén García Sarmiento ndiro zita rake rizere; akatora zita rekuti Darío nekuti nenzira iyoyo nhengo dzemhuri yake dzaizivikanwa, "los Daríos."
Ivo vanyori vanonongedzera kuSalvadoran Francisco Gavidia seimwe yemasimba avo makuru, sezvo zvakamutungamira mukugadzirisa ndima dzeFrance dzeAlexandria kuenda kumetric yeSpanish. Ichokwadi ndechekuti Rubén Darío anoonekwa nevanyanzvi semumiriri akakurumbira wezvinyorwa zvemazuva ano mumutauro wechiSpanish uye zita rake ndi pakati pemakuru ekupedzisira eLatin American fikisheni.
2 Kuroora uye nzvimbo dzekudyidzana
3 Makore apfuura eRubén Darío
4 Kuongororwa kwemamwe enhetembo dzinozivikanwa naRubén Darío
4.1 "Margarita" (Mune memoriamu)
Biography yemunyori yakakura kwazvo. Rubén akagamuchira dzidziso yehunhu, aive anofarira kuverenga uye munyori ane hunyanzvi. Pazera remakore gumi nemasere akaita zvinyorwa zvake zvekutanga mupepanhau reLeón; munhetembo idzo dzekutanga anoratidzira pfungwa yake yekuzvimiririra uye inofambira mberi, achigara achida democracy. Muna 14 (pazera remakore gumi nemashanu) wechidiki Rubén akaita rwendo rwake rwekutanga kuEl Salvador, semumiriri wevamiriri venyika.
Pazera remakore gumi nematanhatu, anga atove mupiro kumapepanhau akasiyana siyana muManagua. Muna 1886 akatamira kuChile kuti awane ruzivo semutori wenhau mumapepanhau akadai se Nguva, La Libertad y Herald; maviri ekutanga kubva kuSantiago uye ekupedzisira kubva kuValparaíso. Munyika ino yekuSouth America akasangana naPedro Balmaceda Toro, uyo akamusuma kumatunhu epamusoro-soro eruzivo, vezvematongerwo enyika pamwe nevemagariro enyika akasiya simba ravo kuna nyanduri weNicaragua.
Valparaíso ndipo paiburitswa muunganidzwa wenhetembo Azul, inokosheswa nevatsoropodzi vezvinyorwa senzvimbo yekutanga yazvino uno. Pamusoro pezvo, basa iri rinomupa zvakakwana kuti ave munyori wepepanhau. Rudzi rweBuenos Aires. Ipapo, pakati pa1889 na1892, akaenderera nebasa rake semutori wenhau uye mudetembi munyika dzinoverengeka dzeCentral America.
Kubva muna 1892 akashanda senhengo yenhume dzeNicaragua muEurope, mu IV Centenary yeDiscovery yeAmerica. Idzo dzaive nguva dzekubatana neabohemian madenderedzwa eParis. Gore rakatevera akadzokera kuSouth America, akagara muBuenos Aires kusvika 1896 uye ikoko akaburitsa maviri emabasa ake ekutsaurira - kutsanangura mazuva ano mumutauro wechiSpanish. Izvo zvisingawanzo y Profane prose nedzimwe nhetembo.
Mufananidzo waRubén Darío.
Kuroora uye nzvimbo dzekudyidzana
Rudo hukama uye hwepedyo nekutsakatika kwemhuri kwakaratidza zvakawanda zvekunyora kwake kufemerwa. Paaive nemakore makumi maviri nematatu, Rubén Darío akaroora Rafaela Contreras Cañas muManagua munaJune 23. Gore rakatevera dangwe rake rakazvarwa uye muna 1890 akazova chirikadzi nekuti Contreras akafa mushure mekuvhiyiwa.
Musi waKurume 8, 1893 akaroora - akamanikidzwa, sekureva kwevanyori - naRosario Emelina. Sezviri pachena, Rubén Darío akagadzwa nehama dzemukadzi wake wemauto. Nekudaro, mudetembi weNicaragua akatora mukana wekugara kwake muMadrid semunyori wepepanhau reBuenos Aires La Nación nekuti, kubvira gore ra1898, kugara kune imwe nzvimbo pakati peParis neMadrid.
Muna 1900 akasangana naFrancisca Sánchez muguta guru reSpain, mukadzi asingagoni kuverenga nekunyora aive murombo waakaroora zvine hunyanzvi uye akaita vana vana (mumwe chete ndiye akapona, Rubén Darío Sánchez, "Guincho"). Nyanduri akamudzidzisa kuverenga neshamwari dzake (vanogara kuParis) Amando Nervo naManuel Machado.
Kubva panzendo dzake dzakasiyana siyana kuburikidza neSpain akaunganidza zvaakaona mubhuku Yemazuva ano Spain. Makoronike uye zvinyorwa zvemifananidzo (1901). Panguva iyoyo, Rubén Darío anga atomutsa kuyemurwa nevanozivikanwa vanodzivirira Modernism muSpain, pakati pavo paive naJacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez naRamón María del Valle-Inclán.
Muna 1903 akagadzwa Consul weNicaragua muParis. Makore maviri gare gare, akatora chikamu sechikamu chevatumwa vaitarisira kugadzirisa gakava renzvimbo neHonduras. Zvakare, panguva ya1905 akaburitsa rake rechitatu bhuku guru: Nziyo dzehupenyu netariro, swans nedzimwe nhetembo.
Mushure meizvozvo Rubén Darío vakapinda muChitatu Pan American Musangano (1906) semunyori wenhume dzeNicaragua. Muna 1907 Emelina akaonekwa muParis achitora kodzero yake semukadzi. Ipapo munyori akadzokera kuNicaragua kunyorera kurambana, asi zvakashaya basa.
Makore apfuura eRubén Darío
Pakupera kwa1907 akagadzwa semumiriri weNicaragua muMadrid nehurumende yaJuan Manuel Zelaya, nekuda kwezita rake semunyori muAmerica neEurope. Akabata chinzvimbo ichi kusvika 1909. Mushure mezvo, aive pakati pa1910 na1913 muzvinzvimbo zvakasiyana uye mamishinari ehurumende munyika dzakasiyana dzeLatin America.
Munguva iyoyo akaburitsa Hupenyu hwaRubén Darío hwakanyorwa naiye ega e Nhoroondo yemabhuku angu, magwaro maviri ehupenyu anokosha kuti anzwisise hupenyu hwake uye kunyora kwake kushanduka.
MuBarcelona, ​​akanyora rake rekupedzisira bhuku renhetembo. Ndinoimba kuArgentina nedzimwe nhetembo (1914). Pakupedzisira, mushure mekushanya kwenguva pfupi kuGuatemala, kutanga kweHondo Huru kwakamumanikidza kuti adzokere kuNicaragua, kwaakafira muLeón, muna Kukadzi 6, 1916. Aive nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe.
Kuongororwa kwemamwe enhetembo dzinozivikanwa naRubén Darío
"Margarita" (Mune memoriamu)
“Unorangarira here kuti waida kuve Margarita Gautier?
Yakagadzika mupfungwa dzangu chako chinoshamisa chiso chiri,
patakadya pamwe chete, pazuva rekutanga,
Miromo yako mitsvuku, yepepuru
vakaseva champagne kubva kune inotapira baccarat;
minwe yako yakafukura inotapira Margarita,
< > Uye iwe waiziva kuti akakunamata kare!
“Gare gare, o, ruva reHysteria! Wanga uchichema uye uchiseka;
"Uye masikati akasuruvara emazuva anotapira,"
Kunge daisy rerudo, zvakakusvibisa! ”.
Quote naRubén Darío.
Iri ibasa rakafemerwa nerudo uye neshungu yekufirwa nemunhu waunoda. Inowanikwa mukati Profane prose nedzimwe nhetembo (1896). Inotorwa seimwe yemavambo ezvinyorwa zveMazuva ano mumutauro wechiSpanish, unozivikanwa nehukama hwayo hwetsika, mutauro unokosha uye kurongeka.
“Mwanasikana wamambo akasuwa… ko mwanasikana wamambo achavei?
Kugomera kunopukunyuka mumuromo mayo sitirobheri,
ndiani akarasa kuseka, ndiani arasa ruvara.
Mwanasikana wamambo akachenuruka pachigaro chake chegoridhe,
iyo keyboard yekiyi yayo yegoridhe yakanyarara;
uye muhari yakakanganwa ruva rinopera simba.
“Bindu rinozadza kukunda kwemapikoko.
Kutaura, muridzi anoti banal zvinhu,
uye, vakapfeka dzvuku, pirouettes iyo jester.
Mwanasikana wamambo haaseke, mwanasikana wamambo haanzwe
muchindakadzi anodzingirira nedenga rekumabvazuva
dhiragoni inodzungaira kubva mukusajeka kusinganzwisisike.
Uri kufunga nezve muchinda weGolconda kana weChina,
kana mune iyo kuyerera kweArgentina kwamira
kuona kubva mumaziso ake kutapira kwechiedza
Kana mumambo wezvitsuwa zvemaruva anonhuwirira,
kana mune iye anotonga mangoda akajeka,
kana muridzi anodada wemaparera eHormuz?
"Ah! Muchinda murombo nemuromo wepingi
anoda kumedza, anoda kuve shavishavi,
Iva nemapapiro akareruka, pasi pedenga rinobhururuka,
enda kuzuva nechiyero chakajeka che ray,
kwazisai maruva nendima dzaMay,
kana kurasika mumhepo pakutinhira kwegungwa.
"Haachadi muzinda, kana sirivheri rinotenderera vhiri,
kana ruchiva rwakaroya, kana jira tsvuku,
kana iwo akabatana swans mune azure nyanza.
Uye maruva akasuwa ruva redare;
iyo jasmine yeEast, iyo nelumbos yekumaodzanyemba,
kubva kuWest madhahlias nemaruva kubva kumaodzanyemba.
"Murombo mwanasikana wamambo ane maziso ebhuruu! ...".
Dhirowa naRubén Darío.
"Sonatina" inouyawo kubva Profane prose. Inoratidza nhetembo nemametric akakwana, ine nzira itsva yekuvandudza nharo yako, iine ruzivo rwakanyanya pane chromatic uye sensorial zvinhu. Zvimwechetezvo, munhetembo iyi munobuda maGreek-Latin zvinyorwa zvengano uye zvekare zveFrench Versailles zvinhu zvinoshandiswa sezvinhu zvekutaurirana zvavanonzwa. Iri ibasa rerondedzero rine muripo wakakura wekushushikana, wakataurwa kubva kune yepedyo uye yekuzviisa pasi peiyo protagonist, muchindakadzi azere nekusuwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Nhetembo dzaRubén Darío
Elizabeth Gaskell. 5 makuru mabasa emunyori weVictorian